Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 5G မိုဘိုင်းကွန်ရက် တည်ဆောက်
တရုတ်နိုင်ငံ တိဗက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ချိုမိုလန်းမားတောင် ရှေ့တန်းစခန်း အမြင့် ၆,၅၀၀ မီတာတွင် 5G အခြေစိုက်စခန်း အချက်ပြစနစ်ကို စမ်းသပ်နေကြစဉ် (ဆင်ဟွာ) Science & Technology
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယင်းကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းအရေအတွက် သန်း ၂၆၀ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် 5G အခြေစိုက်စခန်းပေါင်း ၇၉၂,၀၀၀ အား တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း MIIT ၏ ဒုတိယဝန်ကြီး Liu Liehong က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် 5G မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း တင်ပို့မှုသည် ယခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် စုစုပေါင်း တင်ပို့မှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလိမ့်မည်ဟု ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 5G အခြေစိုက်စခန်း ၆၀၀,၀၀၀ ကျော်အား တည်ဆောက်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။ ဝန်ကြီးဌာနသည် 5G ကွန်ရက်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို စနစ်တကျ မြှင့်တင်သွားရန် ကတိပြုခဲ့ပြီး အဓိကမြို့ကြီးများတွင် 5G လွှမ်းခြုံမှုများ နှင့် ပူးတွဲတည်ဆောက်မှု နှင့် မျှဝေမှုတို့ကို အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, April 19 (Xinhua) -- China has made initial achievements in building the world's largest 5G mobile network, the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) said Monday.
China aims to build more than 600,000 5G base stations in 2021. The MIIT has pledged efforts to promote the construction and application of 5G networks in an orderly manner, accelerate 5G coverage in major cities and advance co-construction and sharing. ■
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ တိဘက်ဒေသ၌ လေဆိပ်သစ် သုံးခု တည်ဆောက်မည်
Next Article တရုတ်နိုင်ငံက အာကာသပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုအတွက် ဂြိုဟ်တုအသစ်တစ်စင်း လွှတ်တင်